Alles über alles: Ny fivarotana ao amin'ny Hesse any Alemà izao dia afaka mandrara ny mpanjifa tsy vita vaksiny rehetra
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Alemana » Alles über alles: Ny fivarotana ao amin'ny Hesse any Alemà izao dia afaka mandrara ny mpanjifa tsy vita vaksiny rehetra
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • culinary • Vaovao Mafana Alemana • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • fiantsenana • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Alles über alles: Ny fivarotana ao amin'ny Hesse any Alemà izao dia afaka mandrara ny mpanjifa tsy vita vaksiny rehetra.
Nahazo alalana handao ny zon'olombelona nividy sakafo sy kojakoja ilaina amin'ny tsena hafa ny fivarotana lehibe any Hesse, Alemana.
Eo ambanin'ny politika vaovao, ny fivarotana ao Hesse, Alemana dia afaka manapa-kevitra raha hampihatra ny 'fitsipika 2G'.
Ho fanampin'ny safidy 2G vaovao, ny mpiasan'ny hopitaly izay mijanona ho tsy voamarina dia tsy maintsy dinihina amin'ny Covid-19 indroa isan-kerinandro.
Hesse no fanjakana alemanina voalohany mamela ny lalàna amin'ny fivarotana enta-madinika sy fivarotana antsinjarany hafa.
Ireo fivarotana lehibe ao Hesse, Germany Nahazo alalana handà ny zon'ny tsy vaky volo hividy sakafo sy kojakoja ilaina hafa, ka nahatonga an'i Hesse fanjakana Alemanina voalohany hamela ny orinasa handà ny fidirana tsy voadinika na dia ireo zavatra ilaina amin'ny fototra aza.
Minisitry ny filoha Hesse Volker Bouffier
Ny lalàna vaovao nametraka ohatra iray sahiran-tsaina satria mitolona amin'ny fanoherana fanoherana ny vaksiny ny mpifanila trano aminy ary nohamafisin'ny chancelier state.
Eo ambanin'ity politika vaovao ity dia afaka manapa-kevitra ny magazay raha hampihatra ny 'fitsipika 2G', izay midika hoe mamela ny hiditra amin'ny vaksiny sy sitrana ihany ('geimpft' sy 'genesen' amin'ny teny alemà) na ny lalàm-panorenan'ny «3G» maivana kokoa, manodidina ireo izay dia nanandrana ratsy ho an'ny virus (getestet).
Minisitry ny filoha Hesse Volker Bouffier Nilaza izy fa manantena ny tsy hampiharina be io lalàna vaovao io, ary manazava hoe: "Manantena izahay fa io andro io dia hampiasaina fotsiny io safidy io ary ny orinasa izay manome izay ilain'ny andavanandro dia tsy hampiasa izany."
“Ny fiarovana lehibe indrindra dia ny fanomezana vaksiny. Ary mbola sarotra ihany izany, tsy manaja birao ary afaka mahazo ”, hoy i Herr Bouffier, nanamarika fa ny masking sy ny fepetra fanalavirana ny fiaraha-monina dia hijanona ho an'ireo orinasa izay tsy nahavita nitondra ny 2G Rule tsy ekena.
Ho takalon'ny fanekena ny olona vita vaksiny na sitrana ihany, ny orinasa 2G dia avela tsy hanalavitra ny fiaraha-monina sy ny saron-tava - angamba fivarotana mangatsiaka taorian'ny fisaronan'ny tarehy mavesatra 18 volana.
Ho fanampin'ny safidy 2G vaovao, ny mpiasan'ny hopitaly izay mijanona ho tsy voamarina dia tsy maintsy dinihina amin'ny COVID-19 indroa isan-kerinandro, ary ny mpianatra dia mbola takiana misaron-doha rehefa mipetraka ao am-pianarana.
Raha valo hafa farafaharatsiny alemaina Ny fanjakana dia nanokatra ny safidy 2G ho an'ny orinasa sasany toy ny trano fisotroana, trano fisakafoanana, gym, cinema ary trano fivarotan-trano, Hesse no voalohany mamela ny lalàna amin'ny fivarotana enta-madinika sy fivarotana antsinjarany hafa.
Na dia ny firenena eropeana hafa toa an'i Italia sy i Frantsa aza dia nampihatra ny fepetra takiana amin'ny vaksinina mandrara ny olona tsy vaky volo tsy hiasa (Italia) na hisakafo amin'ny kafe (France), ny ankamaroan'ny mpitarika dia nijanona tsy nanome baiko mivantana ireo jabs ho an'ny olom-pireneny.
Ny fanjakan'i "Hesse" any Alemana dia manome alalana ho an'ireo supermarket lehibe handràra ny Unvaccined - Fikambanana Prussian of America hoy:
Oktobra 17, 2021 ao amin'ny 02: 52